TRANQUILANDIA - I-Airbnb
Costa Esmeralda, Panamá, Panama
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJavier
· Amagumbi okulala ayi-6
· Iibhedi eziyi-15
· Amagumbi okuhlambela ayi-5
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uJavier iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yindlu yala maxesha eyakhiwe ngezikhongozeli, inabo bonke ubuntofontofo, i-airconditioning kuwo onke amagumbi, ichibi elihle elineengxangxasi, ineziteyi ezininzi ezinendawo ezahlukeneyo ezibandakanya i-ROOF TOP, enembono entle, ineendawo ezixhotyiswe kakuhle kakhulu. ikhitshi, a Grill, ukukhanyisa yenye iinkalo ezininzi ezintle zendlu, iye eninzi uhlaza izibane, kukho gazebo phambi echibini. Inamagumbi ayi-7, amagumbi okuhlambela ayi-6. Ulwandle luyi-1 km
Mhlawumbi kuphela kwendlu eyenziwe ngezikhongozeli kule ndawo, iindwendwe ziya kuba namava okulala kwindlu yendalo, kodwa ngabo bonke ubutofotofo bendlu yanamhlanje, yinto eyahlukileyo, kodwa ngamava amnandi.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-3
4.69 out of 5 stars from 56 reviews
4.69 · Izimvo eziyi-56
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi56
Indlu ikwindawo yePasifiki yasePanama, iyure eyi-1 ukusuka kwisiXeko sasePanama, kwindawo kukho iilwandle ezikufutshane kakhulu apho unokusefa khona, uphakame ngegwele, kukho iindawo zokuthenga, iindawo zokhenketho ezibandayo, umzekelo idolophu yaseValle. Indawo entle kakhulu enentaba-mlilo, uya kufumana iikliniki, izibhedlele, kunye neevenkile zazo zonke iintlobo.
Umbuki zindwendwe ngu- Javier
Hola , me llamo Javier , soy de Panama , ofrezco mi casa hecha de contenedores , es muy espaciosa , divertida , tiene todas las comodidades necesarias para pasar unos días relax en una casa única y diferente
Ipropathi inama caretaker ahlala kufutshane nendlu, uzakubakhona asombulule ingxaki yendlu, nam ndizobaqaphela abandwendwe xa kukho into abayidingayo.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: Emva ko 12:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Costa Esmeralda